समाज मनोविज्ञानमा कोरोनाको असर | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
समाज मनोविज्ञानमा कोरोनाको असर
२०७७ भाद्र १२, शुक्रबार ०७:५९ गते
संसारको दिल, दिमाग र ज्यानलाई नै गहिरो गरी स्पर्श गर्न सफल कोरानाले खासगरी अनेकौँ प्रभाव देखाइरहेछ । जति आर्थिक क्षति भइरहेछ र जति भौतिक क्षति पु¥याइरहेछ त्योभन्दा पनि कैयौँ गुणा मनोसंरचना भत्काइरहेछ यसले, जुन कम दारूण छैन । यस्तो असर के बालक, के युवा, के वयस्क वा वृद्ध सबैको दिल र दिमागलाई अन्तस्तलमा पुगेर बिथोल्न थालिरहेछ अहिले ।
बालबालिका घरै बस्नुपर्दा जुन कुण्ठा भोगिरहेछन्, त्यो अनुमानभन्दा पनि कैयौँ गुणा बढी छ । साथीहरुसँग भेट्ने, मनका कुरा भन्ने उत्कट चाहना हुन्छ उनीहरुमा । त्यो बालसुलभ गुण हुँदै हो । विद्यालय पुगेपछि छिमेकका भन्दा अलिक वरपर घर भएकासँग ज्यादा मनका कुरा खोलेर भन्छन् उनीहरु । भन्न त कतिपय ब्लुमफिल्ड आदि भाषा मनोवैज्ञानिकहरु बच्चा जन्मँदा खाली दिमाग जन्मेको हुन्छ, हुर्कंदै जाँदा उसमा ज्ञान, सीप, अभिवृत्ति, गुण र प्रवृत्तिहरु विकसित हुने हुन् भन्ने मान्यता राख्छन् । अब्राहम नोम चम्स्की आदि भाषा मनोवैज्ञानिकहरु बालक जन्मँदै सबै भाषा र सीप आदि लिएर जन्मन्छ । जन्मपश्चात् उसको जुन भाषिक व्यवहार र सीपादिसँग साक्षात्कार हुन्छ त्यही प्राप्त हुन्छ भन्दछन् ।
रित्तो भने पनि र भरिपूर्ण ठानिए पनि गुण र प्रवृत्तिका सवालमा यहाँ पूर्वीय दर्शनले व्याख्या गरेझैँ बालक जन्मँदा पूर्वजन्मका गुण, संस्कार र व्यवहारहरु वासनात्मकरुपमा लिएरै आएको हुन्छ । वंशाणुगत प्रभावले मात्र यसलाई पार लगाउन शायदै सक्ला ! किनभने एउटै कोख, आहार र व्यवहार पाएका जम्ल्याहा र तिम्ल्याहाहरुमा पनि किन गुण, व्यवहार र भिन्न रूचि देखिने गर्दछ ।
यसैले, उनीहरु आप्mनो गुण र प्रवृत्ति मिल्नेलाई साथी बनाउँछन् । ती छिमेकी पनि हुनसक्छन् र टाढाका पनि । जसको टाढाका साथीसँग मित्रता गाँसिएको छ ती अहिले ज्यादा कुण्ठित रहेका देखिन्छन् । कोरोनाको कहर अब छिट्टै टुङ्गिएला भन्दा झन्झन् बढ्दो क्रममा देख्दा उनीहरुको मन झन् प्रताडित बन्दो छ । सबै पढाइप्रति रूचि राख्ने प्रकृतिका हुन्नन् । भिन्न गुण, सीप, रूचि र क्षमता लिएर आएका बच्चामध्ये जो पढाइप्रति बढी रूचि राख्छन् ती झन् प्रताडित बन्दै गएका छन् । प्रत्येक कक्षामा प्रायः एकदेखि १० रोलनम्बरसम्मका विद्यार्थीलाई मात्र लिने हो भने पनि झन्डै पाँच लाखभित्र यसबाट प्रत्यक्ष प्रताडित बन्दैछन् । कतिपय पारिवारिक पहल र व्यक्तिगत पहल गरेर पनि थोरैधेरै पढाइमा जुट्ने र जोडिने कार्यमा प्रयत्नशील पाइन्छन् । जो अनलाइन कक्षा, शिक्षक घरदैलो कार्यक्रमहरुबाट पनि टाढा छन् ती झन् अधिक तनावमा देखिन्छन् । खेल, कला आदि इत्यादिमा रूचि राख्ने विद्यार्थी भने जति अभिभावक तनावमा छन् त्यति यिनीहरु रहेका देखिन्नन् । बरू लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण कुण्ठित देखिन्छन् । तीमध्ये कतिपयले सोसल मिडिया, टिभी, फ्री फायर गेम, पब्जी गेम आदि इत्यादिबाट मनोरञ्जन लिइरहेका पनि पाइन्छन् ।
लकडाउन खुला भएपछि कोरोना डढेलोझैँ सल्कन थालेपछि बालबालिका पनि यसबाट प्रभावित भएको खबर सुनेपछि अधिकांश बालबालिका झन् मृत्युभयबाट त्रसित हुन थालेका छन् । कतै नयाँ मान्छे देखिँदा तुरून्तै डरले घरभित्र छिरिहाल्ने, घरमा अभिभावकसँग पनि त्यति बोल्न नखोज्ने, साथीहरुसँग कुरा गर्दा पनि त्यस्तै ‘अब के हुने हो ? कोरोनाले धेरैलाई लग्दै छ रे ! हामीलाई पनि छुने हो कि !’ साथीहरुसँग कुरा गर्न पाउनेले पनि यस्तै आशंका र भय व्यक्त गरिरहेको देखिन्छ ।
उनीहरु बाहिर निस्कनुपर्दा पनि मास्क लगाउँछन् । सचेतनताका दृष्टिले यो सकारात्मक कुरा हो । तर, उनीहरुको व्यवहार र हाउभाउबाट उनीहरुमा सचेतनाभन्दा ज्यादा भय र त्रास पैदा गरिरहेको देखिन्छ । यस्तो किसिमको त्रास निकै घातक हुनसक्छ । जसले उनीहरुमा निद्रामा पनि बर्बराउने, रूने, काँप्ने, ज्वरो आउनेजस्ता समस्या हुनसक्छन् ।
यसर्थ, अभिभावकले आप्mना बालबालिकालाई उनीहरुको गुण, प्रवृत्ति र संवेदनशीलता बुझेर आवश्यक मात्रामा मात्र सूचना दिनु आवश्यक छ । उनीहरुको बालमनोरचनाले पचाउनेभन्दा त्रासद घटना बताउनु र दृश्य देखाउनु महँगो पर्नसक्छ । उनीहरुको बालमनोरचनाले पचाउन सक्नेसम्मका घटना र सूचना दिन नसक्दा र कतिपय अवस्थामा लगाम खिच्न नसक्दा पनि पोखरी र नदीमा डुबुल्की लाउन जाने र जीवन नै गुमाउने गरेका धेरै घटनाहरु पनि सुन्नमा आएका छन् । तसर्थ, अभिभावकले सुझबुझपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने स्थिति छ अहिले ।
किन पनि भने अहिले अभिभावकले अभिभावक र गुरूगुरूआमा दुवैको दोहोरो भूमिका खेल्नु परिरहेछ । दुवै भूमिका खेल्नु अत्यन्त कठिन कार्य हो, तथापि आपूmलाई जानकारी र ज्ञान नभएको विषयमा मनोविद् र जानकारहरुसँग जानकारी लिएर भए पनि कुशल अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसै पनि बच्चा मोबाइलमा दिनभरि गेम खेल्ने, टिभी हेर्ने गर्दा उनीहरुको शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक क्षमता गुमाइरहेका हुन्छन् । भनेको नमान्ने, अटेर गर्ने, जिद्दी गर्ने, अभिभावकहरुसँगै चिडचिडाहट अनुभूति गर्ने, रिसाउने, ठुस्कनेजस्ता नकारात्मक कार्य गरी दिक्क बनाइरहेका हुन्छन् । त्यसमा शिक्षकको भूमिका थपिँदा झन् समस्या परिरहेको हुन्छ, तापनि संयम हुनु र उचित परामर्श प्रदान गर्नुमै भलाइ देखिन्छ ।
पूर्वआधारभूत तह (नर्सरीदेखि ५ कक्षासम्म)मा पढ्ने बालबालिकाका सापेक्षमा उत्तर आधारभूत तह (६ देखि ८ सम्म) र माध्यमिक तह (९ र १०)मा अध्ययन गर्ने किशोरकिशोरीहरुको वयअनुरुप अवस्था नाजुक हुन्छ नै । उनीहरुको उमेरअनुसारको शारीरिक आकारहरुमा परिवर्तन हुँदै जाँदा त्यसले मानसिक तथा संवेगात्मक अवस्थामा पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यसर्थ, उनीहरु पनि मनोवैज्ञानिकरुपमा प्रभावित भइरहेकै हुन्छन् नै, त्यसमा यो कोरोना थप समस्या बनेर आएपछि दबाबमा परिरहेका छन् ।
अझ किशोरभन्दा पनि किशोरीहरु ज्यादा दबाब अनुभूति गरिरहेका देखिन्छन् । त्यस्तो साथीसँग मनका कुरा गर्न नपाउँदा, सौन्दर्य प्रसाधन गर्न नपाउँदा, चिटिक्क परेर हिँड्न नपाई घरमै खुम्चिएर बस्नुपर्दा, घरको काममा ज्यादा खटिरहनुपर्दा, छोरीका गतिविधिमाथि अभिभावकको गहिरो नजर परिरहने गर्दा, शंका र व्यङ्ग्य गर्ने गरिरहँदा र रजस्वला र शिश्न ईष्र्या आदि जस्ता कुराहरुले उनीहरुलाई तनावग्रस्त बनाइरहेका हुन्छन् । अझ अधिक रुपवती हुँदा उच्च अहंकारजन्य तथा धेरैको कटाक्ष र कम सौन्दर्यवती हुँदा हीनताबोधजन्य तथा अरुले गर्ने नकारात्मक कटाक्ष पनि कम दुःखद हुँदैन ।
यसले एकातिर नकारात्मक बोध हुने हुँदा त्यसले निराशा, निरर्थकता र जीवनप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने स्थिति सृजना भइरहेको छ अहिले । यस्तो स्थिति ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा देखिएको छ । अझ १२ कक्षाका सन्दर्भमा भने किशोरकिशोरी दुवैलाई परीक्षाको अन्योलताले दिक्दार बनाइरहेछ अहिले । यसबाट उनीहरुमा विसङ्गतिबोध भइरहेछ । यसले उनीहरुलाई जिउन, केही रचनात्मक कार्य गर्न, खुलेर बोल्न र हाँस्नसमेत दिइरहेको देखिन्न । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले माथिल्लो वर्ष वा सेमेष्टरमा अध्ययन गर्न पाउने अनुमति दिए पनि कतिपय अनलाइनको पहुँचबाहिर हुनेहरु पनि तनावमै रहेको पाइएको छ । यसमा कोरोनाको कहर थप्पिन गएपछि उनीहरुले पनि मानसिक समस्या झेल्नु परिरहेको स्थिति छ ।
अहिले कोरोना सङ्क्रमितहरुको संख्या हेर्दा युवा तथा वयस्क ज्यादा देखिएका छन् । दैनिक ज्याला मजदुरी र पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेदेखि पत्रकारिता गर्ने र कतिपय बिनाकाम लखरलखर हिँड्नेहरु छन् । साथीभाइहरुसँग नभेटुन्जेल मास्क लगाउने र भेटिएपछि मास्क खोलेर दूरी कायमै नगरी गुड्डी हाँक्ने प्रवृत्ति छ ज्यादा । अझ साथीसँगी, इष्टमित्र र चिनेका मान्छेलाई चाहिँ कोरोना लागेको हुँदैन भन्ने आमबुझाइ यिनीहरुमा ज्यादा देखिन्छ । फलस्वरुप, सँगैको साथी पर्दा आपूm पनि परिने भयो भनेर तनावमा छन् कतिपय युवाहरु । अझ कोरोना लागेपछि गरिने सामाजिक बहिष्करण, उपेक्षा र घृणा कोरोनाभन्दा झन् भयावह देखिएको छ अहिले । उसलाई लाग्ने कोरोना मलाई पनि कतै न कतै र कसै न कसै आक्कलझुक्कलमा लाग्न सक्छ भन्ने फराकिलो सोचाइ नभएका मान्छेका कारण पनि संक्रमित धेरै मान्छे कुण्ठा लिएर बाँचिरहेछन् । कतिपय उपेक्षा सहन सकिन्न भन्ने ठानेर कैयौँले आत्महत्या गरेको हामीकहाँ धेरै प्रमाण छन् ।
अझ रोगी र वृद्धहरु झन् तनावमा छन् त्यसै । कोरोनाले छोयो कि चोला गयो भन्ने आमबुझाइ छ प्रायः । त्यसमा अहिले सामान्य रोग लागेर अस्पताल पुगेको मान्छेलाई कोरोना लागेको छ भनेर रिपोर्ट दिने, केही दिन अस्पताल राख्ने अनि आप्mनो मान्छेलाई भेट्न नदिने, यसबीचमा प्रत्यारोपण गर्न सकिने मानव अङ्ग निकाल्ने तथा कोरानाले म¥यो भन्ने र परिवारजनलाई देख्न र भेट्नै नदिई पोको पारेर लगी सद्गत गर्नेजस्तो अवाञ्छित कार्य अस्पतालबाट भइरहेछ भन्ने हल्ला म्यासेन्जरमार्फत फिजाइएको छ । त्यसबाट पनि मान्छे अहिले त्रसित बन्न पुगेका छन् । कोरोनाबाहेकको बिरामी पर्दा पनि अस्पताल नै नगई घरै बस्ने निर्णयमा पुगिरहेछन्, रूग्ण मानिसहरु पनि ।
अझ घरमै आइसोलेसनमा बस्दा मृत्युवरण गरेका खबरहरुले पनि तनाव दिइरहेछन् रोगी, असक्त र संक्रमितलाई । यसर्थ, अफवाहमा फिजाइएका भ्रम वा यथार्थ बताउनेदेखि मनोपरामर्श खड्किरहेको छ अहिले । यसमा मनोवेत्ता र समाजमनोविज्ञहरु सक्रिय हुनुपर्ने स्थिति देखिएको छ । हुन त, राज्यले शिक्षकलाई परामर्श र सहयोगका लागि खटाउने उद्घोष गरेको छ । त्यो कहिले लागू हुने हो यकिनसाथ भन्न सकिन्न । तथापि, यो कार्य यथाशीघ्र होस् र मनोवैज्ञानिकरुपमा हुने क्षति न्यूनीकृत होस् भन्ने विषयमा राज्य र सम्बन्धितको दृष्टि पर्नु जरूरी छ ।